Top 5 iPhoto for Windows 8 bedelan karo
iPhoto waa codsiga sawir dhisay-in ay ku jiraan xidhmo qalab si aad u hesho in ka badan sameeyaan sawiro aad. Apple ayaa hordhac u ah iPhoto ku leeyahay oo dhan, ".... From aad Facebook Wall miiska coffee aad saaxiibka ugu fiican ee mailkooda (ama boostada) Ma badan oo sawiro aad ka badan Miyaad weligaa is suurto gal Oo dhan sameeyo hal meel iPhoto" Laakiin tan ma jiraan wax rasmi ah iPhoto for Windows, iyo Apple ma laha qorshe ay sii daayaan iPhoto u version Windows, waxaad ka heli kartaa kale iPhoto ah haddii aad rabto in aad sifooyinka la mid ah laga heli karo. Halkan iPhoto dhowr barnaamijyada Windows la soo bandhigi doonaa.
Xulashada 1: Fantashow - Easy in la isticmaalo Kan sameeyey Muqaal
Xulashada 2: DVD Muqaal dhise - Kan sameeyey Muqaal Professional u Windows
Xulashada 3: Picasa - All-in-mid Photo Software
Xulashada 4: Photo Gallery - Maareeyaha Great Photo iyo Editor
Xulashada 5: Zoner Photo Studio Free - Photo Manager Bilaashka ah ee Windows
Xulashada 1: Fantashow - Muqaal Kan sameeyey Easy in la isticmaalo
Iyadoo iPhoto, waxaad samayn kartaa oo keliya qaar ka mid ah soo duubey fudud. Laakiin haddii aad rabto in aad soo duubey ku haboon jeer oo kala duwan daqiiqo, Fantashow waa waxa aad u baahan tahay. Waxay bixisaa 200+ mawduucyada il-qabad slideshow si aad u beddesho photos, videos iyo music galay filimada fantastic ku qasabno yar. Xitaa Waxaad ku dari kartaa Intro / credits ama isu geeyo Hababka dheeraad ah si wadajir ah u sheeg sheeko ka dambeeya sawiro iyo videos sida aad jeceshahay. Waxaa intaa dheer, waxa aad awoodi kartaa inaad badbaadiso kaaga slideshow sida file video, si toos ah buu ku gubi in DVD ama post in YouTube iyo Facebook. dheeraad ah oo ku saabsan Fantashow Baro >>
Muuqaalada ayaa slideshow ah iPhoto yihiin kuwo aad u aasaasiga ah iyo xadidan. Dhab ahaantii, waxaa jira dad badan oo dajiya xirfad slideshow in Windows 8, kaas oo ha idinka dhigayaa slideshow cajiib ah ka sii badan intii iPhoto waayeen. Tusaale ahaan, Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe . Bixinta badan 2D / 3D saamaynta guurka, barnaamijkan kuu saamaxayaa inaad sameyso aad slideshow gaar ah la sawiro, videos, iyo heeso. Waxaa ka shaqeeya sida soo jiidashada ah. Waxaa intaa dheer, waxa aad awoodi kartaa inaad badbaadiso kaaga slideshow sida file video, ama si toos ah buu ku gubi in DVD. dheeraad ah oo ku saabsan Baro DVD Slideshow Builder Deluxe >>
Daawo muunad slideshow abuuray DVD Muqaal dhise u Windows
The dhow iPhoto u dhiganta u Windows waa Picasa . Waa software-ka sawir free horumariyo by Google kaa caawinaya in aad u abaabulaan, xaalkaa, iyo sawiro aad, sida habka ugu iPhoto falaa. Waxay leedahay labada version Mac iyo Windows. Waxaad isku dayi kartaa in aad aragto haddii ay iPhoto wanaagsan oo kale Windows.
Xulashada 4: Photo Gallery - Maareeyaha Photo Great iyo Editor
Waxa kale oo ka duwan iPhoto weyn nidaamka Windows waa Photo Gallery codsiga ka Microsoft. Barnaamijkan wuxuu ka caawin karaa in aad si fudud u saxaa, share iyo sawiro digital abaabulo, halka ay interface si sahlan loo isticmaalo ayaa waxaa la doortay caan ah software dadka isticmaala Windows sameeyey.
Zoner Photo Studio Free waa codsi kale oo wanaagsan si istaahil ah tixgelinta haddii aad raadinayso version Windows ah iPhoto. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku kaydiso, abaabulo, iyo xataa DEAD sanamyadiinna. Muuqaal kale oo waa weyn yahay in jadwalka taariikhda, iyagoo dhoob, iyo go'yaasha xiriir sidoo kale si deg deg ah lagu soo shiriyey karaa Tababaraha sawirka.
Siduu u PC Health Check
> Resource > Windows > iPhoto for Windows 8 (Manager PC Photo)